Install java on FreeBSD – box02's little blog
January 28, 2010 by box02
Install java on FreeBSD
FreeBSD-8 မှာ Java ကို install လုပ်တာလေးပါ။ ကျနော်က java/openjdk6 port ကနေ install လုပ်ပါတယ်။ ports တွေကနေ install မလုပ်ခင်အရင်ဆုံး port tree ကို update လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်ကတော့ ports tree update လုပ်တဲ့အခါမှာ portsnap ကိုသုံးတယ်။ ports tree update လုပ်ပေးပြီးပြီဆိုရင် ဆက်ရအောင် …
အဲလို စပြီး install လုပ်တာနဲ့ port install error တွေပြပါမယ်။ Terminal ကပြတဲ့ error messages တွေကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို download ချသင့်ကချရပါမယ်။ ကျနော် install လုပ်စဉ်တုန်းက အောက်ကဟာတွေကို internet မှာရှာပြီး download လုပ်တယ်၊ ပြီးရင် /usr/ports/distfiles အောက်မှာ ထားပေး လိုက်တယ်။
ကျနော့်တုန်းက အပော်ကဟာတွေလိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ port version အလိုက်ပြောင်း ချင်ပြောင်းနိုင်တာမို့ error messages တို့ suggestion messages တို့က ကြည့်ပြီး လုပ်ပေးပါ။ ဒီ java/openjdk6 port ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့ ကျနော်တဲ့ eclipse တို့ virtualbox တို့ စတဲ့ java နဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေ ဆက်သွင်းလို့ရပါပြီး။
Firefox java plugin အတွက်ကတော့ အောက်က command line လေးကို run လိုက်ရင် အဆင်ပြေတယ်။
% ln -s /usr/local/diablo-jdk1.6.0/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
အဲဒါဆိုရင် Firefox java plugin ရပါပြီး။ ကျနော့် firefox35 port version က firefox-3.5.7,1.
This entry was posted in FreeBSD, Howto | Tips and tagged Firefox, FreeBSD, Java, plugins. Bookmark the permalink.
← Fun boys
Install flashplugin for Firefox on FreeBSD →